ဝက်ခြံအမာရွတ်ဖယ်ရှားပစ်ရဖို့ကိုဘယ်လို: မျက်နှာပေါ်မှာဝင်ပြီးအစက်အပြောက်? – Jannah News
ဘလော့ Ilona Pouzin
မိန်းမ – ဖန်ဆင်းခြင်း၏သဘောသဘာဝ,
ကျနော်တို့ Post-ဝက်ခြံ၏ခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာငါတို့စကားပြောဆိုမှုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် (pustules ၏အကျိုးဆက်များ). ယနေ့တွင်, ကျနော်တို့ကိုပြောပြလိမ့်မယ်, ဘယ်လိုအိမ်မှာဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့နှင့်စာရွက်အထိရောက်ဆုံးမျက်နှာဖုံးများကိုမျှဝေရ. နှင့်, ကျနော်တို့လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထုတ်ဖေါ်လိမ့်မယ်, မိတ်ကပ်နှင့်အတူအပြစ်အနာအဆာဖုံးကွယ်ဖို့ဘယ်လို.
အရေပြားရောင်ရမ်းအမြဲမနှစ်မြို့ဖွယ်စိတ်ခံစားမှုဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်သည်. အထူးသဖြင့်, သူတို့အကြိုးဆကျရှိလုပျမြားနှငျ့အရေ၌အမာရွတ်များသို့မဟုတ် Indent ၏ပုံစံကို "Reminder" နောက်ကွယ်မှစွန့်ခွာရသောအခါ. ငါတို့သည်သူ့ကိုအဖယ်ရှားပစ်ခံရဖို့ကြိုးစားကြသည်. ယနေ့တွင်, ငါတို့သည်သင်တို့အကြံပေးချက်များနှင့်အတူမျှဝေပါလိမ့်မယ်, အရာအိမ်တွင်အမာရွတ်များကိုဖယ်ရှားရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်.
ဒါဟာပုံပေါ်စေခြင်းငှါ, ကြောင်း Self-စင်ကြယ်သော Post-ဝက်ခြံ - ကမဖြစ်နိုင်ဘူး. သို့သော်, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖျော်ဖြေဖို့ကိုစတင်ရမည့်အချိန်ပါလျှင် - အရာအားလုံးဖြစ်နိုင်, လတ်ဆတ်သောအမာရွတ်များအများကြီးပိုလွယ်ရောက်စေဖို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့!
Post-ဝက်ခြံအလှကုန်ဖယောင်းနှင့်အတူရုန်းကန် Excellent က. လျှောက်လွှာ၏ Method ကိုအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်: ပစ္စည်းဥစ္စာညျပျြော, pointwise ခြောက်သွေ့ပြီးနောက်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ဖယ်ရှား. ထိုအခါအသားအရေစိုပြေမုန့်လျှောက်ထားရန်သေချာစေပါ.
သင်ကမဝယ်နိုင် ဒီမှာ .
အရောင်ချွတ် - အသက်အရွယ်အစက်အပြောက်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း, အမာရွတ်များပေါ့. သငျသညျအထူးအလှကုန်ကိုသုံးခြင်းဖြင့်ဒီလုပျနိုငျ, နှင့်မျက်နှာဖုံးများကို အသုံးပြု., သင်အလွယ်တကူအိမ်မှာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်.
ချက်ပြုတ်နည်းများလိမ်းဆေး, သင်ဤဆောင်းပါး၏အဆုံးတွင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်ပွတ်တိုက်ခြင်းနှင့်မျက်နှာဖုံးများ. အရောင်ချွတ်လည်းအသားအရေထွက်ပင်မှကူညီပေးသည်, ချောချောမွေ့မွေ့ကြောင့်အောင်, velvety.
အလှကုန်အဆီများနှင့်အတူအနှိပ်. မျက်နှာနှိပ်နယ်၏အကျိုးကျေးဇူးများအတောမသတ်စကားပြောနိုင်သည်! ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ကအိုမင်းနှေးကွေးစေပါတယ်, ဒါဟာအရေပြားအလည်လွှာ tones, ကိုချောမွတ်သောအသားအရေ. သငျသညျအီ 1-2 ပေါက် add နိုင်ပါတယ်အဆိုပါအလှကုန်ရေနံ,.
ဥပမာအား: 1 လက်ဖက်ရည်ဇွန်းဗာဒံရေနံနှင့်2လက်ဖက်ရည်သစ်ပင်ဆီပေါက်, ယူကလစ်, Rosemary. သပ်သပ်ရပ်ရပ်လှုပ်ရှားမှုများကိုအနှိပ်လိုင်းများကျော်အရောအနှောပွတ်သပ်.
စားသုံးဆီများ၏ဖွဲ့စည်းမှု, သင်တို့သိကြသည်, အလွန်အသုံးဝင်သော, တ္ထုများ, အဆိုပါအီဇီဝြဖစ်အရှိန်မြှင့်ပါဝင်ကြောင်း, ဆဲလ်များနှင့်ချောမွေ့အရေပြားအပေါ်ယံ၏သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးအရှိန်အဟုန်မြှင်.
Darsonval device ကို - အစွန်းအထင်းကိုဖယ်ရှားရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်. အနည်းငယ်လျှပ်စစ်လှုပ်ခြင်းကြောင့်, သူကဂရုတစိုက်အရေပြားအလည်လွှာအပေါ်အလုပ်ဖြစ်တယ်. ပဲမျိုးစုံ, nozzle မှတဆင့်, အဆိုပါအရေပြားအပေါ်ယံမှလာ. ထိုအခါဘက်တီးရီးယားအသတ်ခံနေကြ, ရောင်ရမ်းခြင်းအရွက်.
Darsonval ကိုလည်းသွေးလည်ပတ်မှုစနစ် accelerates. စနစ်တကျအသုံးပြုမှုအမာရွတ်များ၏သဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်းပါလျော့ကျစေပါတယ်, အမာရွတ်များ. ဒါ့အပြင်တစ်ခုလုံးအဖြစ်အရေပြားအလည်လွှာ၏အခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန်, ပွနျလညျ၏လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန်, ကော်လာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုမြှင့်လုပ်ဆောင်, elastin, gilaurona.
လိမ်းဆေးနဲ့ပေါင်းပြီး, လိမ်း, ပွတ်တိုက် - သင်ကအံ့သြဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရလိမ့်မယ်! အခွင့်အရေး ယန္တရား Darsonval Buy .
cider ရှလကာရည်နှင့်သံပုရာနှင့်အတူလိမ်းစေရန်အသုံးဝင်သည်. ဒါဟာမသာ Whiten, ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ရှူးများ၏လျင်မြန်စွာအနာကိုအားပေးအားမြှောက်, ပွနျလညျ accelerates, အဆိုပါအရေပြားအပေါ်ယံချော, ဒါဟာ elasticity ပေးသည်.
သင့်ရဲ့ဗီတာမင်ယူ, အထူးသဖြင့်, A နှင့် S က. အတွက်သင်တန်းများ2လ. သူတို့ကအရေပြားအခြေအနေတိုးတက်လာဖို့ကူညီ. လည်း, လုံလောက်သောရေကိုသောက်.
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကနေသင့်ရဲ့အသားအရေကာကွယ်ပါ -inache မှောင်မိုက်အစက်အပြောက်ဖွဲ့စည်းစေမည်, ထို, အဘယ်သူမျှမအားဖွငျ့, ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ဆင်ယင်ခြယ်သ. အထူးသဖြင့်, သငျသညျအက်ဆစ် peels ပြုပါသို့မဟုတ်လိမ္မော်ရောင်၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုသုံးပါလျှင်, ရှောကျသီး, ကျွဲကောသီး.
ကြည့်ရှုခြင်း, အကြံပေးချက်များသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးဖြစ်ကြောင်း! ကုသမှုအချိန်မီစတင် - အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်, သဘောတူ? အိမ်မှာ, သင် Post-ဝက်ခြံဖယ်ရှားပစ်ရနိုငျသညျ.
သငျသညျအတှဲကုထုံးအေးဂျင့်ကိုသုံးပါချင်ပါတယ်, အဆိုပါအွန်လိုင်းစတိုးဆေးဆိုင်အမှတ်တံဆိပ်ရည်ညွှန်းကိုးကား Pharmacosmetica .
သင်တန်း, တစ်ဦးပြင်းထန်ကိစ္စတွင်ပါလျှင်: နက်ရှိုင်းသောအမာရွတ်များ, unhealed ရောင်ရမ်းပြီ, နှင့်အရေပြားအောက်ဆုံးပညာရေး - ကအရေပြားအထူးကုဆရာသွားရောက်ရကျိုးနပ်သည်. သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောအရေပြားအပေါ်ယံအနာကိုငြိမ်းစေသင့်တယ်, ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ပြည်တည်၏အဘယ်သူမျှမမြင်နိုင်ဆိုင်းဘုတ်များ.
တစ်လုပ်-Up ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ, ကြောင်းသင်အမာရွတ်များဖုံးကွယ်ကူညီပေးပါမည်:
အရေပြား primer အပေါ် Apply, ကကယ်ဆယ်ရေးစခန်း align မှကူညီပေးပါမည်.
နောက်ထပ်, အထူးဖြီးသို့မဟုတ်ရေမြှုပ်ကို အသုံးပြု. ဖုံးကွယ် Apply. ယင်းအပေါ်ယံပိုင်းစေရန်မလိုအပ်လည်းထူ! ဒါဟာအပေါက်ခုံဖိနပ်နှင့်အခွအေနကေိုပိုမိုဆိုးရွားနိုင်ပါတယ်.
ပျက်စီးသွားသောဒေသများတွင်, ဖုံးကွယ်လျှောက်ထား, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကူညီပေးပါမည်
နီခြင်းအကူအညီနဲ့အစိမ်းရောင်ဖုံးကွယ်ဖျောက်ထားပါ, ကဿုံရုပ်ဖျက်ပေးတတ်. ကဖြီးနှင့်အတူ dotted ရပါမည် Apply.
စိုးမိုးရေးကိုသတိရပါ: ကမျက်စိသို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းခွဲဝေချထားပေးရန်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး. မျက်ခုံးအပေါ်ကိုအနည်းငယ်ဝဲစေပိုကောင်းဒါဟာဖြစ်ပါသည်, နှုတ်ခမ်းနှုတ်ခမ်းနီသို့မဟုတ်တောက်ပြောင်အရိပ်လျှောက်ထားသင့်ပါတယ် nyudovogo, မျက်စိအနည်းငယ်အနက်ရောင်ခဲတံဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်.
အရည်အသွေးကိုအမြဲတမ်းသုံးရန်, စမ်းသပ်ပြီးအလှကုန် , ဓာတ်မတည်ဖြစ်ပေါ်စေမ.
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အဆောက်အရှိပါတယ်, သငျသညျအိမ်မှာချက်ပြုတ်နိုင်သော. သူတို့ကယားယံခြင်းသက်သာရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်, နှင့်သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးအရှိန်အဟုန်မြှင်. သင်တို့သည်လည်းသတိထားမိပါလိမ့်မယ်, အရေပြားအလှအပနှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်အတူထွန်းလင်းကြလိမ့်မည်.
အရေးအကြီးဆုံးကတော့, မှတ်မိ - မျက်နှာဖုံးများစေ, ယင်းမုန့်ကိုမှန်မှန်သင့်အခွံနှင့်လျှောက်ထား, မဟုတ်ရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ရလဒ်မ.
သငျသညျလူနာဖြစ်ရပါမည်, ကအလုံအလောက်ကော်လာဂျင်ထုတ်လုပ်သင့်ပါတယ်အဖြစ်, သူပျက်စီးဒေသများရှိဖြည့်နိုင်ပါလိမ့်မည်. အလှကုန်ထုတ်ကုန်သာအမာရွတ်များဖယ်ရှားပစ်ရမကူညီကြလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်လည်းဝက်ခြံကာကွယ်တားဆီးဖို့.
အီဒထို့အပြင်အတူရွှံ့၏မျက်နှာဖုံးများ အသားအရေအခွအေနေတိုးတက်လာဖို့ကူညီ, ပွနျလညျအရှိန်အဟုန်မြှင်. ဒါဟာအလွန်အရေးကြီးပါသည်, ကော်လာဂျင်နဲ့ elastin ထုတ်လုပ်ရန်. အားလုံးပြီးနောက်, ဤနှစ်ခု element တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသားအရေ၏ elasticity တာဝန်ရှိသည်.
Ester (Rosemary, လာဗင်ဒါ, manuka, ရှောကျသီး) သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်အရှိန်အဟုန်မြှင့်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်း Post-ဝက်ခြံ၏လျင်မြန်သောအနာရောဂါငြိမ်းစရာမြှင့်တင်ရန်.
ရွှံ့စေး - ပျော့ပြောင်း, ဒါဟာအပေါက်များနှင့်အစိုဓာတ်ကိုဆေးကြော. အလုံအလောက် 1-2 ပေါက်ပါလိမ့်မည် - ညင်ညင်သာသာတစ်ဦးအဖြူသို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်ရွှံ့ထဲတွင်ရေနံ Add.
ပျားရည်နှင့်သစ်ကြံပိုး - ပျော့ပျောင်းအရေပြားအလည်လွှာအောင်, တောက်ပ, အာဟာရနှင့် moisturize. ပျားရည် - အံ့သြဖွယ်ထုတ်ကုန်, အရာရောဂါများနံပါတ်ကနေအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေခြင်းနှင့်မကြာခဏအလှကုန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုသည်. သစ်ကြံပိုး - အသားအရေကိုတက်ပူနွေးလာသည်, ဒါဟာဇီဝြဖစ်ထအမြန်နှုန်း.
အလှကုန်ရေခဲ - ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်! အဆိုပါ parsley ယူရန်လိုအပ်သောကြောင့်, ထုကခုတ် (သို့မဟုတ်တစ် Blender အတွက်ခုတ်) ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေကိုလောင်း, ဒါကြောင့်စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်ပါစေနှင့်ရေခဲများအတွက်အထူးပုံစံများသို့သွန်းလောင်း. နံနက်ယံ၌ရေခဲနှင့်ညနေပိုင်းနှင့်အတူမျက်နှာသုတ်ဖို့အလွန်အသုံးဝင်သော. နံနက်ယံ၌ - သငျအားပေးစရာဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ညဦးယံအချိန် - အလုပ်အပြီးပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာ.
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်နှင့်အတူ Badyaga - ထိရောက်သောဆေးတစ်လက်, သောအသားအရေ align စေရန်ကူညီပေးသည်, ရောင်ရမ်းခြင်းပပျောက်ခြင်းနှင့်ယားယံခြင်းသက်သာ. ကြော် mask ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်၎င်း: 1 ရွှံ့ဇွန်း, 1 ဇွန်းနှင့်ဖွဲ့အစီအမံ4ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်၏ပေါက် 3%.
အများဆုံးသင်သည် Post-ဝက်ခြံများ၏မျက်နှာဖုံးကြိုက်တယ်နှင့်နေ့တိုင်းလုပ်ကို Select လုပ်ပါ. ဒါဟာအစက၎င်း၏စောင့်ရှောက်မှုပွတ်နယ်ရေခဲနှင့် paraffin အတွက်ထည့်သွင်းရန်ထိုက်သည်. သငျသညျဝက်ခြံလက္ခဏာနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကူညီရန်ရှုပ်ထွေးကုထုံးနှင့်သတိထားအရေပြားစောင့်ရှောက်မှု.
အော်ဂဲနစ်အလှကုန်ကိုသုံးပါ , ရှုပ်ထွေးသောဗီတာမင်မတွန် .
လျှင်, 2-3 လကြာပြီးတဲ့နောက်သင်မြင်နိုင်အပြောင်းအလဲများကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်, သင်တစ်ဦးအရေပြားသို့မဟုတ်လှတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ပါ, အရေပြားအတွက်အားလုံးအချိန်ကိုဂရုစိုက် - သူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလိမ့်မယ်!
စိုးရိမ်ပူပန်ဝက်ခြံအပေါငျးတို့သဘာသာရပ်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း, ကျနော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်၏အကြောင်းတရားများနှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်, သူတို့ကိုဆက်ဆံဖို့အဘယ်သူအကူအညီကိုတောင်းဆိုဖို့ဘယ်လို.
နောက်ဆုံး, ယနေ့အကျင့်တို့နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး, အိမ်မှာ Post-ဝက်ခြံအနိုင်ရဖို့ဘယ်လို. ချက်ပြုတ်နည်းမျက်နှာဖုံးများသင့်ရဲ့ Self-စောင့်ရှောက်မှုမျိုးစုံနှင့်အသားအရေချောမွေ့နှင့်တောက်ပစေ.
ကိုသတိရပါ - သငျလှပသောများမှာ!
ဘလော့ဂ်မှ Subscribe, အလှတရား၏ကမ္ဘာမှအားလုံးအသစ်ကထုတ်ကုန်များ၏ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန်စောင့်ရှောက်ရန်, ကျန်းမာရေးနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှု.
သငျသညျ Ilona ခဲ့ကြသည်ကတည်းက
ဤဆောင်းပါးတွင်သင်တို့ဆီသို့အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် အကယ်., အဲဒါကိုတန်ဖိုးထား - စိတျနှလုံးအပွင့်လင်း)))
ဝက်ခြံအမာရွတ်: အမာရွတ်များဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ, ပိုကောင်းတဲ့ကွာတဲ့, လေဆာရောင်ခြည်ဖယ်ရှားရေး, သလိပ်များအမာရွတ်များကုသ